စပါးလင်ဆီ⁠မွှေးစိုက်ပျိုး⁠ပြုစုနည်း - Myanmar Farmers' Portal
Home စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ စပါးလင်ဆီ⁠မွှေးစိုက်ပျိုး⁠ပြုစုနည်း
မြန်မာအမည် – စပါးလင်ဆီမွှေးပင်
တရုတ်အမည် – ရှမ်းမောင်
အင်္ဂလိပ်အမည် – CITRONELLA
ရုက္ခဗေဒအမည် -1. Cymbopogon nar dus rendle
မျိုးရင်း – Gramineae
သက်ကယ်ပင်နှင့်သဏ္ဍာန်တူသည်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း အလေ့ကျ ပေါက်သည့် ဂျပန်မြက် (မြက်ယား) မျိုးနှင့် ပိုမိုတူသည်။ သို့သော် စပါးလင်ကဲ့သို့ မွှေးသည့် ရနံ့မရှိ၊စပါးလင်ဆီမွှေးရုံတစ်ရုံသည် (၄-၆)ပေအထိ မြင့်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် မြေပြန့်မှ အမြင့်ပေ (၂၀၀၀)အထိ ဖြစ်ထွန်းနိုင်သည်။
စပါးလင်(ဟင်းစား) (Cymbopogon citratus)နှင့်စပါးလင် ဆီမွှေးဟု ကွဲပြားသည်။စပါးလင်ဆီမွှေးတွင်လည်း ဆီပါဝင်မှုနှုန်းအရ အမျိုး အစားခွဲခြားကြသည်။
ဆပ်ပြာပေါက်သော မြေမှတပါး ရေလွယ်ကူသော မည်သည့် မြေမျိုး၌မဆို ဖြစ်ထွန်းနိုင်သည်။မိုးများသည့် ဒေသရှိ ဂဝံမြေနှင့် ဂဝံအောက် ခံမြေမျိုးများ၌ ကောင်းစွာဖြစ်ထွန်းနိုင်သည်။
ပူနွေးသောရာသီရှိ၍ ရေလွယ်ကူသော မိုးများသည့် ဒေသများတွင် စိုက်ပျိုးကြသည်။မိုးရာသီ၌ စိုက်ပျိုးလေ့ရှိ ကြသည်။
အပင်ကြီး အမြစ်အုံမှ အဆစ်ပါသည့် ပင်တက်ကိုဖဲ့၍ တိုက်ရိုက်စိုက်ပျိုးကြသည်။
မိုးဦးကျ ကဆုန်၊နယုန်(မေ၊ဇွန်)လ မြေအစိုဓါတ် လုံလောက်အောင် မိုးရွာပြီးပါက စတင်စိုက်ပျိုးကြသည်။ ရေသွင်းနိုင်ပါက တစ်နှစ်ပတ် လုံးစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။
Round –up (Glyphosade)ပေါင်းသတ်ဆေးကို မစိုက်မီ (၁၅)ရက် ကြိုတင်၍ ရေတစ်ဂါလံ၌ (၅၀ -၇၅) စီစီ/ဗစ်ပရုတ်ဆီဗူး (၁ ၁/၂- ၂ ၁/၂ )ဘူး နှုန်းဖျော်စပ်ပြီး ၊တစ်ဧကလျှင်ဆေး (၂)လီတာ /ပလပ်စတစ်ရေသန့်ဘူး (၂)ဘူးခန့်ကို စိုက်ပျိုးမည့်မြေပေါ်ရှိ ပေါင်းမြက်များအား ပက်ဖျန်းထားပါ။ ဆေးဖျန်းပြီးနောက် အနည်းဆုံးနေသာချိန် (၄)နာရီခန့်ရှိရပါမည်။
ပေါင်းသတ်ဆေးသုံးထားသည့် ဧရိယာအတွင်း၌ ရေသွင်း(သို့) မိုးရွာပြီး အစိုဓါတ်လုံလောက်ပါက မြေကိုစတင် ပြုပြင်နိုင်သည်။ အနည်း ဆုံး ထယ် (၁)စပ်၊ ထွန် (၂)စပ်၊ ထွန်ယက်ပြီးပါက လက်ဖြင့် (သို့) မြက်ကောက်ထွန် ထယ်ကိရိယာဖြင့် မြက်ခေါင်းများ ကုန်စင်အောင် ကောက်ရမည်။ မြေပြင်ချိန် မြက်ခေါင်းများ ကုန်စင်ပါက ပြုစု စရိတ်သက်သာစေသည်။ မြေပြုပြင်စဉ် ထည့်သွင်းမည့် မြေခံမြေသြဇာအချိုး ကို တစ်ချိန်တည်း အသုံးပြုရမည်။ မြက်ခေါင်းကုန်စင်လျှင် (၃)ပေ အကျယ် မြွေရိုးဘောင်များကို ဘောင်ဖော်ကိရိယာဖြင့် (သို့) ပေါက်ပြား ဖြင့် စိုက်ဘောင်များဖော်ပြရမည်။ စိုက်ဘောင်အမြင့်မှာ ကုန်းကျပါက (၆)လက်မ နှင့် မြေနိမ့်ပါက (၁)ပေ အမြင့်ရှိရမည်။
မြေအစိုဓါတ် လုံလောက်ချိန်တွင် လတ်ဆတ်သောစပါးလင်ဆီမွှေး သားတက်များကို စိုက်ဘောင်ထိပ်၌ စပါးလင်ဆီမွှေး တစ်ပင်နှင့် တစ်ပင် (၁)ပေခွာ၍ အောက်ခြေအဆစ်များ မြုပ်သည်အထိ စိုက်ရမည်။ ပင်ခြေ၌ ကြပ်သိပ်အောင် ဖိနှိပ်ပါ။အရွက်ဖုံးအောက် (၁) လက်မ ခန့်ထိ မြေမြုပ်လျှင် မိုးများချိန်၌ မြေအောက် အဆစ်များ ပုပ်ရိနိုင်သည်။
ပင်ကြား၊တန်းကြား (၃-၁)ပေဖြင့် တစ်ဧကပင်ရေ (၁၄၅၂၀)ပင်လိုအပ်သည်။
သားတက်များစိုက်ပျိုးပြီး ၊နောက်တစ်လအတွင်း ပင်ခြေပေါင်းများကို နိုင်နှင်းအောင် နှိမ်နှင်းခြင်း၊ယိုင်လဲသော ပျိုးပင်များအား တည့်မတ် ပေးခြင်း၊ မြေဆွပေါင်းသင်ခြင်း၊ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာဖျန်းခြင်းနှင့် ပေါင်းကင်းစင်ပါက ဘိုင်အိုကွန်ဘိုဇာကဲ့သို့ စက်ရုံထုတ်မြေသြဇာများကို (၄၅)ရက်သားလျှင် တစ်ကြိမ်ကျွေးမွေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
မြေပြုပြင်ချိန်၌ ထည့်သွင်းရမည့် အချိုးဖြစ်သော ထုံး၊ဘိုင်အိုကွန်ပိုဇာ နှင့်အားဖြည့်မြေသြဇာများကို တစ်ပြိုင် တည်းကျွေးပါ။ စိုက်ခင်း ပေါင်းနုတ်ပြီး ၊မြေမဆွမီ ဘိုင်အိုကွန်ပိုဇာနှင့် အားဖြည့်မြေသြဇာများကို အနည်းငယ်စီ အကြိမ်များများကျွေးပေးပြီးမှ မြေဆွပြီးရေသွင်း ပါ။ဇီဝစူပါနှင့် အသင့်သုံး အီးအမ်များကို အပင်ကြီးထွားမှုလျင် မြန်စေရန် တစ်လတစ်ကြိမ် ပက်ဖျန်းပေးရမည်။
တစ်ဧကအတွက် မြေသြဇာနှုန်းထားမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
(က) ထုံး (၁၀ ပိဿာ ဝင်အိတ်) – ၁၅ အိတ်
(ခ) ယူရီးယား (၁၁၂ ပေါင် ဝင်အိတ်) -၁.၅ အိတ်
(ဂ)တီစူပါ (၁၁၂ ပေါင်ဝင်အိတ်) – ၁အိတ်
(ဃ)ပိုတက် (၁၁၂ ပေါင်ဝင်အိတ်) – ၁.၅ အိတ်
(င) ဘိုင်အိုကွန်ပိုဇာ (၁၅ ပိဿာဝင်အိတ်) -၂ အိတ်
(စ) အားဖြည့်မြေသြဇာ (၁၅ ပိဿာဝင်အိတ်) – ၂ အိတ်
(ဆ) ဇီဝစူပါ ရွက်ဖျန်းမြေသြဇာ (၀.၅) လီတာပုလင်း – ၅ ပုလင်း
(ဇ) အသင့်သုံးအီးအမ် (၁) လီတာပုလင်း – ၁၀ ပုလင်း
ရက်ရှည်ကြာ ရေဝပ်ခြင်းကို မကြိုက်ပါ။သို့သော် ပင်ခြေမြေကြီး အမြဲတန်းစိုစွတ်သည်ကို နှစ်သက်သည်။ ရေပေးသွင်းနိုင်ပါက စိုက်ခင်း မြေ၌ အစိုဓါတ်မပြတ်ရှိစေရပါမည်။
တစ်နှစ်လျှင် (၄) လတစ်ကြိမ် (၃) ကြိမ် ရိတ်သိမ်းနိုင်ပါသည်။အရွက်စိုများကို မြေပြင်နှင့်ကပ်၍ တံစဉ်ဖြင့် ရိတ်သိမ်းပြီး ၊စပါးကဲ့သို့ စည်းနှောင်တင်ပို့နိုင်ပါသည်။
ရိတ်သိမ်းပြီး စပါးလင်ရွက်စိုများကို စက်ရုံသို့ နေ့ချင်းပို့ပါက ဆီထွက်နှုန်းကို ပိုကောင်းစေပါသည်။
တစ်ဧကလျှင် တစ်နှစ်စပါးလင်ဆီမွှေးရွက်စို (၁၀)တန်၊
စိုက်ပျိုးသုတ ပစ္စယ (Pissaya Info)
မွနျမာအမညျ – စပါးလငျဆီမှေးပငျ
တရုတျအမညျ – ရှမျးမောငျ
အင်ျဂလိပျအမညျ – CITRONELLA
ရုက်ခဗဒေအမညျ -1. Cymbopogon nar dus rendle
မြိုးရငျး – Gramineae
သကျကယျပငျနှငျ့သဏ်ဍာနျတူသညျ။ရနျကုနျတိုငျးအတှငျး အလကြေ့ ပေါကျသညျ့ ဂပြနျမွကျ (မွကျယား) မြိုးနှငျ့ ပိုမိုတူသညျ။ သို့သျော စပါးလငျကဲ့သို့ မှေးသညျ့ ရနံ့မရှိ၊စပါးလငျဆီမှေးရုံတဈရုံသညျ (၄-၆)ပအေထိ မွငျ့သညျ။ မွနျမာနိုငျငံအနှံ့အပွားတှငျ မွပွေနျ့မှ အမွငျ့ပေ (၂၀၀၀)အထိ ဖွဈထှနျးနိုငျသညျ။
စပါးလငျ(ဟငျးစား) (Cymbopogon citratus)နှငျ့စပါးလငျ ဆီမှေးဟု ကှဲပွားသညျ။စပါးလငျဆီမှေးတှငျလညျး ဆီပါဝငျမှုနှုနျးအရ အမြိုး အစားခှဲခွားကွသညျ။
ဆပျပွာပေါကျသော မွမှေတပါး ရလှေယျကူသော မညျသညျ့ မွမြေိုး၌မဆို ဖွဈထှနျးနိုငျသညျ။မိုးမြားသညျ့ ဒသေရှိ ဂဝံမွနှေငျ့ ဂဝံအောကျ ခံမွမြေိုးမြား၌ ကောငျးစှာဖွဈထှနျးနိုငျသညျ။
ပူနှေးသောရာသီရှိ၍ ရလှေယျကူသော မိုးမြားသညျ့ ဒသေမြားတှငျ စိုကျပြိုးကွသညျ။မိုးရာသီ၌ စိုကျပြိုးလရှေိ့ ကွသညျ။
အပငျကွီး အမွဈအုံမှ အဆဈပါသညျ့ ပငျတကျကိုဖဲ့၍ တိုကျရိုကျစိုကျပြိုးကွသညျ။
မိုးဦးကြ ကဆုနျ၊နယုနျ(မေ၊ဇှနျ)လ မွအေစိုဓါတျ လုံလောကျအောငျ မိုးရှာပွီးပါက စတငျစိုကျပြိုးကွသညျ။ ရသှေငျးနိုငျပါက တဈနှဈပတျ လုံးစိုကျပြိုးနိုငျသညျ။
Round –up (Glyphosade)ပေါငျးသတျဆေးကို မစိုကျမီ (၁၅)ရကျ ကွိုတငျ၍ ရတေဈဂါလံ၌ (၅၀ -၇၅) စီစီ/ဗဈပရုတျဆီဗူး (၁ ၁/၂- ၂ ၁/၂ )ဘူး နှုနျးဖြျောစပျပွီး ၊တဈဧကလြှငျဆေး (၂)လီတာ /ပလပျစတဈရသေနျ့ဘူး (၂)ဘူးခနျ့ကို စိုကျပြိုးမညျ့မွပေျေါရှိ ပေါငျးမွကျမြားအား ပကျဖနျြးထားပါ။ ဆေးဖနျြးပွီးနောကျ အနညျးဆုံးနသောခြိနျ (၄)နာရီခနျ့ရှိရပါမညျ။
ပေါငျးသတျဆေးသုံးထားသညျ့ ဧရိယာအတှငျး၌ ရသှေငျး(သို့) မိုးရှာပွီး အစိုဓါတျလုံလောကျပါက မွကေိုစတငျ ပွုပွငျနိုငျသညျ။ အနညျး ဆုံး ထယျ (၁)စပျ၊ ထှနျ (၂)စပျ၊ ထှနျယကျပွီးပါက လကျဖွငျ့ (သို့) မွကျကောကျထှနျ ထယျကိရိယာဖွငျ့ မွကျခေါငျးမြား ကုနျစငျအောငျ ကောကျရမညျ။ မွပွေငျခြိနျ မွကျခေါငျးမြား ကုနျစငျပါက ပွုစု စရိတျသကျသာစသေညျ။ မွပွေုပွငျစဉျ ထညျ့သှငျးမညျ့ မွခေံမွသွေဇာအခြိုး ကို တဈခြိနျတညျး အသုံးပွုရမညျ။ မွကျခေါငျးကုနျစငျလြှငျ (၃)ပေ အကယျြ မွှရေိုးဘောငျမြားကို ဘောငျဖျောကိရိယာဖွငျ့ (သို့) ပေါကျပွား ဖွငျ့ စိုကျဘောငျမြားဖျောပွရမညျ။ စိုကျဘောငျအမွငျ့မှာ ကုနျးကပြါက (၆)လကျမ နှငျ့ မွနေိမျ့ပါက (၁)ပေ အမွငျ့ရှိရမညျ။
မွအေစိုဓါတျ လုံလောကျခြိနျတှငျ လတျဆတျသောစပါးလငျဆီမှေး သားတကျမြားကို စိုကျဘောငျထိပျ၌ စပါးလငျဆီမှေး တဈပငျနှငျ့ တဈပငျ (၁)ပခှော၍ အောကျခွအေဆဈမြား မွုပျသညျအထိ စိုကျရမညျ။ ပငျခွေ၌ ကွပျသိပျအောငျ ဖိနှိပျပါ။အရှကျဖုံးအောကျ (၁) လကျမ ခနျ့ထိ မွမွေုပျလြှငျ မိုးမြားခြိနျ၌ မွအေောကျ အဆဈမြား ပုပျရိနိုငျသညျ။
ပငျကွား၊တနျးကွား (၃-၁)ပဖွေငျ့ တဈဧကပငျရေ (၁၄၅၂၀)ပငျလိုအပျသညျ။
သားတကျမြားစိုကျပြိုးပွီး ၊နောကျတဈလအတှငျး ပငျခွပေေါငျးမြားကို နိုငျနှငျးအောငျ နှိမျနှငျးခွငျး၊ယိုငျလဲသော ပြိုးပငျမြားအား တညျ့မတျ ပေးခွငျး၊ မွဆှေပေါငျးသငျခွငျး၊ ရှကျဖနျြးမွသွေဇာဖနျြးခွငျးနှငျ့ ပေါငျးကငျးစငျပါက ဘိုငျအိုကှနျဘိုဇာကဲ့သို့ စကျရုံထုတျမွသွေဇာမြားကို (၄၅)ရကျသားလြှငျ တဈကွိမျကြှေးမှေးခွငျး လုပျငနျးမြားကို ဆောငျရှကျရမညျ။
မွပွေုပွငျခြိနျ၌ ထညျ့သှငျးရမညျ့ အခြိုးဖွဈသော ထုံး၊ဘိုငျအိုကှနျပိုဇာ နှငျ့အားဖွညျ့မွသွေဇာမြားကို တဈပွိုငျ တညျးကြှေးပါ။ စိုကျခငျး ပေါငျးနုတျပွီး ၊မွမေဆှမီ ဘိုငျအိုကှနျပိုဇာနှငျ့ အားဖွညျ့မွသွေဇာမြားကို အနညျးငယျစီ အကွိမျမြားမြားကြှေးပေးပွီးမှ မွဆှေပွီးရသှေငျး ပါ။ဇီဝစူပါနှငျ့ အသငျ့သုံး အီးအမျမြားကို အပငျကွီးထှားမှုလငျြ မွနျစရေနျ တဈလတဈကွိမျ ပကျဖနျြးပေးရမညျ။
တဈဧကအတှကျ မွသွေဇာနှုနျးထားမှာ အောကျပါအတိုငျးဖွဈပါသညျ။
(က) ထုံး (၁၀ ပိဿာ ဝငျအိတျ) – ၁၅ အိတျ
(ခ) ယူရီးယား (၁၁၂ ပေါငျ ဝငျအိတျ) -၁.၅ အိတျ
(ဂ)တီစူပါ (၁၁၂ ပေါငျဝငျအိတျ) – ၁အိတျ
(ဃ)ပိုတကျ (၁၁၂ ပေါငျဝငျအိတျ) – ၁.၅ အိတျ
(င) ဘိုငျအိုကှနျပိုဇာ (၁၅ ပိဿာဝငျအိတျ) -၂ အိတျ
(စ) အားဖွညျ့မွသွေဇာ (၁၅ ပိဿာဝငျအိတျ) – ၂ အိတျ
(ဆ) ဇီဝစူပါ ရှကျဖနျြးမွသွေဇာ (ဝ.၅) လီတာပုလငျး – ၅ ပုလငျး
(ဇ) အသငျ့သုံးအီးအမျ (၁) လီတာပုလငျး – ၁၀ ပုလငျး
ရကျရှညျကွာ ရဝေပျခွငျးကို မကွိုကျပါ။သို့သျော ပငျခွမွေကွေီး အမွဲတနျးစိုစှတျသညျကို နှဈသကျသညျ။ ရပေေးသှငျးနိုငျပါက စိုကျခငျး မွေ၌ အစိုဓါတျမပွတျရှိစရေပါမညျ။
တဈနှဈလြှငျ (၄) လတဈကွိမျ (၃) ကွိမျ ရိတျသိမျးနိုငျပါသညျ။အရှကျစိုမြားကို မွပွေငျနှငျ့ကပျ၍ တံစဉျဖွငျ့ ရိတျသိမျးပွီး ၊စပါးကဲ့သို့ စညျးနှောငျတငျပို့နိုငျပါသညျ။
ရိတျသိမျးပွီး စပါးလငျရှကျစိုမြားကို စကျရုံသို့ နခေ့ငျြးပို့ပါက ဆီထှကျနှုနျးကို ပိုကောငျးစပေါသညျ။
တဈဧကလြှငျ တဈနှဈစပါးလငျဆီမှေးရှကျစို (၁၀)တနျ၊
စိုကျပြိုးသုတ ပစ်စယ (Pissaya Info)